Intsha ye-iPad Mini, i-Apple's mini iba yi-Pro | IPhone iindaba
UKarim Hmeidan | 15/09/2021 21:00 | iPad
Izolo u-Apple ubambe i-Keynote ngo-Septemba ka-2021. I-Keynote esoloko ijolise kulwaziso lwe-iPhone kunye ne-Apple Watch kwaye yindlela eyazalisekiswa ngayo. Uluhlu olutsha lwe-iPhone 13, kunye ne-Apple Watch Series ye-7 elindelwe ngokungafakwanga uyilo olutsha. Kodwa iApple ikwafuna ukusothusa ngenye into: iMini Mini entsha. I-iPad entsha yemilinganiselo emincinci efumana uyilo lwee-iPads ezintsha ezilandela uluhlu lwePro. Qhubeka ufunda ukuba sikuxelela zonke iinkcukacha ...
Njengoko ubona kumfanekiso ongaphambili, i-iPad Mini ibuyela kwiindaba zethu kwaye iyenza ngeyona ndlela ifanelekileyo. Ngamaxesha amaninzi sithethile malunga nokuguquguquka kwe-Mini Mini, i-iPad efanelekileyo yokuyiphatha kule mihla yethu kwaye ngakumbi ngokuhambelana nepensile ye-Apple. U-Apple usizisele into ebesiyifuna: i-Apple Mini enoyilo lwe-Pro Pro, uyilo ngendlela esele inayo i-iPad Air yamuva, kwaye ngoku eza kutshintshwa (kunye ne-iPad eguquguqukayo).
Iscreen se-edge-edge esinemiphetho emincinci kunye neekona ezijikeleziweyo, ii-intshi eziyi-8,3. Yonke loo nto ikhuselwe yindlu eyi-100% ehlaziyiweyo efumaneka kwi-Space Grey, Pink, Purple, okanye Star White. Isikrini (i-500 nits) ngendlela eqhubeka netekhnoloji yeTone yeNyaniso kunye a umbala obanzi we-gamut ocutha ukubonakaliswa kwaye usivumele ukuba sibe nemibala eqaqambileyo kunye neetekisi ezibukhali.
Kwaye ukuba i-Mini Mini yangaphambili yayihambelana nepensile yokuqala ye-Apple, ngeli xesha I-Apple iyenza ukuba ihambelane nesizukulwane sesibini sePensile ka-Apple (ithengiswe yodwa nge-135 yeerandi), Ipensile enamathela kumazibuthe kwicala le-Mini Mini kwaye ihlawulise ngaphandle kwentambo.
Ukulandela umdla ka-Apple kwezokhuseleko, kule meko balandela ekhondweni lePad Air yamuva kwaye faka i-ID yokuChukumisa kwiqhosha eliphezulu le-Mini Mini. I-ID yokuChukumisa abaninzi abafuna ukuyibona kwi-iPhone kodwa kubonakala ngathi ayide iphele iza. Kwaye wena, ngaba ukhetha i-ID yokuBamba kwi-ID yobuso?
Kulungile, sijamelene ne-iPad Mini kunye nokusikelwa umda oku kubandakanya, inyani kukuba iApple ifuna ukubeka amakhadi ayo etafileni kwaye ithathe i-Mini Mini iye kwinqanaba eliphezulu. Ngokucacileyo ayibandakanyi iprosesa ye-M1 ye-Pro Pro, kodwa kule Mini yePad Mini sine i-A15 Bionic entsha, iprosesa eya kuthi ngendlela iya kukhwela kwi-iPhone 13 kunye ne-13 Pro. Inye I-CPU engundoqo emithandathu ethembisa ukuba iya kuba ngama-40% ngokukhawuleza kwaye iya kuba naye Injini ye-Apple yeNeural eya kuphucula isantya sokuhamba komsebenzi. Ngendlela, ngokwe-Apple, i-iPad Mini ine Isiseko seGPU ezintlanu, ilungele ukuqhuba eyona midlalo ilungileyo, okanye ukuyisa kumda kusetyenziso loyilo.
El I-USB-C yenza ukubonakala kwayo kwi-Mini Mini njengezibuko kuphela, iyakusivumela ukuba sihlawulise okanye sisebenzise nasiphi na isincedisi esihambelana ne-USB-C (nditsho iihard drive zangaphandle). Kwaye malunga nonxibelelwano, uApple ufuna ukuzisa i-iPad Mini kwinqanaba le-iPhone 13 entsha: Unxibelelwano lwe-5G kunye ne-6th isizukulwane se-Wi-Fi, uqhagamshelo olukhawulezayo kwintengiso.
Andizukujolisa kakhulu kwiimpawu zekhamera, Andikaze ndibengummeli weekhamera ze-iPadsNangona ungothuka bangaphi abantu abasebenzisa ii-iPads zabo njengeekhamera eziphambili. Kuyamangalisa ukutshintsha kwekhamera yangaphambili efikelela kwii-megapixels ezili-12 nge-engile ebanzi, Kwaye njengoko sibonile kwezinye ii-iPads siya kuba nayo Ukusekwa okugxilwe ngaphakathi okuya kusivumela ukuba siphucule iifowuni zethu zevidiyo. Ikhamera engemva iyaphuculwa ngekona ebanzi eya kuthi ngandlela ithile iphucule iifoto zethu kwaye iskene namaxwebhu.
I-iPad Mini esele siyigcinile kwiwebhusayithi ye-Apple kwaye sinako yamkela uLwesihlanu olandelayo, ngoSeptemba 24. Zonke ngexabiso le- € 549 kokona kubiza kakhulu (i-64 GB kuhlobo lweWifi), ukuya kuthi ga kwi-889 € ngexabiso layo eliphezulu (i-256 GB kwi-Wifi + 5G version). Olukhetho olukhulu lokuthatha ukuba unomdla kwisixhobo esiguqukayo kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPad » I-Mini Mini entsha, i-Apple's mini ihamba ngePro